DIIWAAN GALINTA - Archives
CAAFIMAADKA CUSUB FARSHAXANKA QODOBO kale shaneemo heshiisyo DHAQAALAHA
'Big Hero 6' uma imanayo MCU ka dib oo dhan - ugu yaraan weli ma ahan - BGR
Aqoonsiga jilaa-yaraha Fantastic Four ee ugu horreeyay ee MCU waa la soo dayn lahaa - BGR
Paul Bettany ayaa kaliya sheegay in layaabka 'WandaVision' ee uu kufsaday waagii hore aan la shaacin. Iyada oo laba qaybood ka harsan yihiin showgii ugu horreeyay ee Marvel TV ee loogu talagalay Disney +, ugu yaraan ...
'WandaVision' ugu dambeyntiina waxay siisay taageerayaasha muuqaal MCU-da caadiga ah kadib-dhibcaha - BGR
WandaVision Qaybta 7, oo hadda laga sii daayo Disney +, waa qaybtii ugu horreysay ee bandhigga TV-ga si loogu soo bandhigo muuqaal-dhibco dheeri ah. Qeybta 7 waxay noo keeneysaa jawaabo dheeri ah WandaVision, oo ay ku jiraan ...
Netflix "Tijaabada Chicago 7" Waa Bilaash YouTube-ka Toddobaadkan - BGR
Netflix ayaa ka dhigi doonta The Chicago Trial 7 lacag la’aan si ay uga daawadaan YouTube dhamaadka usbuucan. Waxaad ka daawan kartaa filimka Aaron Sorkin bilaash Jimcaha, Febraayo 19 markay tahay 12:00 pm PT illaa Sabtida, Febraayo 20 markay tahay 23:59 pm PT.…
Waa tan muuqaalka 'Dadka oo dhan' xilli 2, oo bilaabanaya Jimcaha - BGR
Xilliga 2-aad ee Bini-aadamka oo dhan wuxuu ka soo baxayaa TV-ga Apple + Jimcaha, iyada oo qayb cusub oo taxana ah lagu daray qulqulka jimce kasta wixii intaa ka dambeeya. Oo ay weheliyaan show cusub, Apple TV + sidoo kale bilaabay…
Daadinta cusub ee "WandaVision" waxay soo jeedinaysaa in sharraxaadda aan sugaynay ay ku dhowdahay halkan ...
WandaVision Waxaa jira kaliya seddex qaybood oo kale oo haray si loo sharaxo qarsoodiga ugu weyn ee MCU. Laakiin waxaa jira daadad cusub oo bixinaya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aan ku arki doonno saddexda qaybood ee ugu dambeeya. A…
Endgame 'ayaa kaliya ku jabisay rikoodhkeeda xafiiskiisa filim Hindi ah oo aadan waligaa ...
Filim Shiineys ah oo dad badani waligood maqal ayaa jabiyay dhowr Avengers: Endgame sanduuqyadeedii xafiiska. Dambi baare Chinatown 3 wuxuu soo xareeyay ku dhowaad $ 400 milyan markii uu bilaabay seddex…
Waxa Ugu Xun Ee Ku Saabsan "WandaVision" Oo Ku Saabsan In La Dayactiro - BGR
Mid ka mid ah dhaliisha ugu weyn ee WandaVision ilaa iyo hadda waxay ku saabsan tahay dhererka qeybaha. Lixda qaybood ee ugu horreeya waxay leeyihiin wakhti ku dhow 30 daqiiqo midkiiba, taas oo aan ku filnayn taageerayaasha qaarkood. Saddexda…
Raadiyahaani waa midka aan ugu jeclahay illaa iyo hadda inta lagu jiro xilligeenna qufulka ...
Qof kasta oo jecel inuu dhageysto muusikada khadka tooska ah kuna raaxeysto adeegyada sida Spotify, waxaa jira degel bilaash ah oo lagu magacaabo Radio Garden oo waliba mudan in la booqdo. Beerta Raadiyaha asal ahaan waa sida ...
1 2 3 ... 90 soo socda